Nhau - Maitiro eChinese Herbal Extracts
Zviyero zveChinese Herbal Extracts
Iyo yakawanda kwazvo yechinyakare yechiChinese mishonga inoburitsa inonyanyotengeswa kunze kwenyika Izvi zvinogona kunge zvine chekuita nenyaya yekuti kuchine misiyano mizhinji mumaonero ezvinyorwa zvemushonga wechiChinese pane zvinowedzerwa nemishonga zveChinese. Vanhu vazhinji vanofunga kuti mishonga yechiChinese inoburitsa yakatosiyana kubva kune echinyakare Chinese mushonga decoction zvidimbu. Iwo mushonga wechiChinese, nekuti kune akawanda asinganzwisisike makemikari maitiro mukugadzirisa mishonga yechiChinese. Ichi chiitiko chisingakwanise kuzadzikiswa kana mushonga wechiChinese wemishonga wasanganiswa. Muchokwadi, iko kutsvagurudza kwekambani yeGuangdong Yifang pane echinyakare Chinese mishonga granules yakaratidza kuti maChinese ekurapa emushonga anogona kuchengetedza akawanda maitiro eChina mushonga. Panguva imwecheteyo, pamwe nekufambira mberi kwetekinoroji, zvinoshanda zvinoshandiswa zvemushonga wechiChinese zvave pachena. Chiyero chemushonga wechiChinese muChinese Pharmacopoeia ndechekureva, isu tinofanirwa kukwanisa kugadzira nekukurumidza sezvinobvira zviyero zvekutanga zvemushonga wechiChinese unosangana nehunhu hwemushonga wechiChinese uye unogamuchirwa nenyika, uye uchiramba uchivandudza mune maitiro ekuitwa. Izvi zvinoenderanawo nemutemo uripo iye zvino wekuvandudza botanicals.
Iyo yekumisikidza uye kuvandudzwa kwechinyakare Chinese mishonga mishonga inotora kumashure. Nekuitwa uye kuenderera mberi kwehurongwa hwenyika yangu hwezvinodhaka, chirongwa chemhando dzedhiragi chakatangwa, kufambiswa kwekuvaka ruzivo rwezvinodhaka kwawedzera, uye basa rekutarisira zvinodhaka rave rakaganhurirwa nekuvandudzwa. Nekudaro, iyo yekumisikidza yechinyakare Chinese mushonga mishonga inoburitsa ichiri kumashure, kunyanya mune zvinotevera zvinhu.
Icho chiyero hachina kusimbiswa. Chinese mishonga inoburitsa yakakosha mbishi zvigadzirwa zvekugadzira kweChinese patent mishonga. Zvinoenderana nehuwandu, inenge 29.8% yemishonga yechiChinese patent inoshandisa mishonga yechiChinese, asi kuchine mamwe maChinese ekurapa ayo asati agadza mwero wenyika. Nekuda kwekushomeka kwemitemo, zvinodiwa-padanho zviyero uye zvemakambani zviyero zvinonyanya kugamuchirwa mukugadzira uye zviitiko zvebhizinesi, uye zvikamu zvehunhu muchibvumirano zvinoshandiswa sehwaro hwekutengeswa kwechigadzirwa, uye nzira dzehunhu hwekutarisa mhando dziri kunetsa.
Icho chiyero hachina kukwana. Izvo zvakakwana zviyero zvinhu ndiyo hwaro hweanoshanda kutonga kwehunhu hweChinese mishonga inobuda. Nekudaro, nekuda kwekuwedzeredzwa kwenguva refu kwemiyero yemamwe maChinese mishonga inotorwa, zvinhu zvakajairwa hazvina kukwana. Semuenzaniso, imwe yechinyakare yechinyakare mushonga weChinese unoburitsa zviyero zvinoshaya pesticidhi masara emiganhu uye inorema simbi yekumisikidza zvinhu, zvimwe zvinoshaya bvunzo zviyero zvezvinhu zvekubatsira, uye zvimwe zvinoshaya microbial muganho wekutarisa.
③ Kusagadzikana mune zviyero. Kune akawanda mwero yezvibodzwa zvemishonga zveChinese, uye pane zvisina kufanira mukutumidza mazita, nzira dzekugadzirira, zvivakwa, uye kuongorora. Semuenzaniso, mamwe echinyakare emushonga wechiChinese ane zita rimwe chete asi nzira dzakasiyana dzekugadzirira. Tichitora chinoburitswa cheScutellaria baicalensis Georgi semuenzaniso, inoonekwa ka12 mumagazini ya2010 yeChinese Pharmacopoeia uye mu "Zvinyorwa zveChinese Chinese Mishonga". , "Yekupedzisira pH kukosha usati waomeswa", "Solution yekuwachira chisina kugadzirwa chigadzirwa" uye zvimwe zvakakosha maitiro parameter ayo anokanganisa mhando yezvakapedzwa zvigadzirwa zvakatosiyana, izvo zviri nyore kukonzera kukanganiswa mukugadzirwa nekushandisa.
Iyo yakajairwa nhanho haina kuenzana. Chiyero cheyakajairika chetsika dzemushonga wechiChinese chinotenderwa nenzira yemishonga mitsva uye chakabatanidzwa muChinese Pharmacopoeia yakanyanya kukwirira. Nekudaro, zvimwe zvekare zvechiChinese zvekurapa mishonga zvine matambudziko senge kukwana tekinoroji uye kushomeka kwekombiki tekinoroji. Uye zvakare, mazhinji emishonga yekuChina inoburitsa vagadziri emabhizinesi madiki ane hushoma hunyanzvi hwehunyanzvi uye huwandu hwekugadzira. Ivo havawanzo kukwidziridza uye kutsvagisa maitiro ekugadzirwa kwechigadzirwa zvakanyanya, uye kushomeka kwakadzika-kwechigadzirwa chigadzirwa, zvichikonzera mune yakaderera kugadzirwa tekinoroji chikumbaridzo cheChinese mishonga inobuda. Makwikwi epasi uye asina kurongeka emusika.
Icho chiyero hachina kubviswa. Nekuda kwekushomeka kwenzira dzekuongorora kuiswa kweChinese mishonga yekubvisa zviyero, mimwe mishonga yechiChinese inoburitsa zviyero "inorarama asi isingafe", zvekuti mamwe matanho asina kuvandudzwa kana kuvandudzwa kwemakore mazhinji achiri kushandiswa, uye chinodikanwa chinokurumidza chekumisikidza muyero wekubvisa nzira
Post nguva: Sep-14-2020